Ny Sabata noharian’i Kristy
"Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy eto ambonin 'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita" —Kôl. 1:16.
Nohamasinina tany amin'ny famoronana ny Sabata. Notendrena ho an'ny olona izy raha fony «(...) niara-nihira ny kintan'ny maraina, ary nihoby avokoa ireo zanak'Andriamanitra». (...)
Satria nitsahatra Izy tamin'ny Sabata dia «(...) nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy (...)» Andriamanitra ary nanokana azy hampiasaina amin'ny zavatra masina. Nomeny an'i Adama ho andro fialan-tsasatra izany. Tsangambato fahatsiarovana ny asa famoronana izy ary noho izany dia famantarana ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavany. (...)
Ny zavatra rehetra dia nohariana tamin'ny alalan'ny Zanak'Andriamanitra. «Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra (...) Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao (...)». Koa satria tsangambato fahatsiarovana ny asa famoronana ny Sabata, dia io koa no antoky ny fitiavan'i Kristy sy ny heriny. (...)
Natambatra tao amin'ny lalàna nomena tao Sinay ny Sabata: tsy tamin'izay anefa no voalohany nahafantarana azy ho andro fitsaharana. Efa nahalala izany ny vahoaka isiraely talohan'ny nahatongavany tao Sinay. Notandremana ny Sabata raha teny an-dalana ho any izy.
Tsy ho an'ny Isiraely irery ny Sabata, fa ho an'izao tontolo izao koa. Nampahafantarina ny olona izany tany Edena, ary tahaka ireo foto-kevitra hafa amin'ny didy folo dia mitaky fankatoavana mandrakizay koa izy. Izao no ambaran'i Kristy momba io lalàna izay misy ny Sabata io: «Mandra-pahafoan 'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray, na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak'izy rehetra». Raha mbola misy koa ny lanitra sy ny tany, dia mbola ho famantarana ny herin'ny Mpamorona ihany ny Sabata. Ary rehefa tafaverina indray atnin' ny fahatsaran-tarehinY eto an-tany i Edena, dia hohajain'ny rehetra ny andro fitsaharana masin' Andriamanitta: «Ary (...) isan-tSabata dia ho avy (...) hiankohoka eo anatrehako (...) hoy Jehovah», ny mponina rehetra ao amin'ny tany vaovao be voninahitra. — IFM, tt. 269-271.